ခရစ်တော်၌သင်ရှိသည် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ယေရှုခရစ်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် အသက်ပြန်ရှင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ ပြန်လည်အသက်တာသည် သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။ ကောလောသဲမြို့သားများထံရေးသောစာတွင် ပေါလုသည် သင့်အားအသက်တာသစ်ကိုအသက်သွင်းနိုင်သည့်နက်နဲသောအရာကိုဖော်ပြခဲ့သည်– “ကမ္ဘာဦးအစကတည်းက သင်တို့ထံမှဝှက်ထားသောအရာများကို သင်တို့သိခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်၊ ခရစ်ယာန်အားလုံးအတွက်။ မြေကြီးပေါ်ရှိ လူသားအားလုံးအတွက် ဘုရားသခင် သိုမှီးထားသော နားမလည်နိုင်သော အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘု​ရား​သ​ခင်​နှင့်​ဆိုင်​သော​သင်​တို့​သည် ဤ​နက်​နဲ​မှု​ကို​နား​လည်​နိုင်​ကြ​၏။ ရေးထားသည်– ခရစ်တော်သည် သင့်အထဲ၌ ရှင်တော်မူ၏။ သို့​ရာ​တွင်​သင်​တို့​သည် ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ဘုန်း​အ​သ​ရေ​တော်​ကို​အ​ကျိုး​ပေး​တော်​မူ​လိမ့်​မည်​ဟု ခိုင်​မြဲ​သော​မျှော်​လင့်​ချက်​ရှိ​ကြ​၏။” (ကော. 1,26-27 HFA)။ ဥပမာ ယေရှု ဤမြေကြီးပေါ်တွင်ရှိစဉ် ခမည်းတော်နှင့် သူ၏ဆက်ဆံရေးကို မည်သို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသနည်း။ “အကြောင်းမူကား၊ ထိုသခင်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်၌လည်းကောင်း၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ဖြစ်ကြ၏။” (ရော 11,36 LUT)! ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်အဖြစ် သားတော်နှင့် ခမည်းတော်ဘုရားအဖြစ် သားတော်ကြားရှိ အတိအကျ ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ အဘမှ၊ အဘအားဖြင့်၊ “ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါ ဘုရားသခင်အား မိန့်တော်မူခဲ့သည်– “သင်တို့သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသောလက်ဆောင်များကို မလိုချင်ကြ။ ဒါပေမယ့် မင်းငါ့ကို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်...
Martin Luther ကခရစ်ယာန်များကိုတစ်ပြိုင်နက်အပြစ်သားများနှင့်သူတော်စင်များဟုခေါ်ခဲ့သည်။ သူကဒီအသုံးအနှုန်းကိုလက်တင်ဘာသာ simul iustus et peccator မှာရေးခဲ့တယ်။ Simul သည်ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်“ တစ်ပြိုင်နက်”၊ iustus သည်“ just” ကိုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည်“ နှင့်” နှင့် peccator သည်“ အပြစ်သား” ကိုဆိုလိုသည်။ စာသားအတိုင်းယူလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့်အပြစ်မဲ့ခြင်းနှစ်ခုလုံး၌နေထိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ လူသာ၏ဆောင်ပုဒ်သည်စကားအရဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သူကစကားအပြောအဆိုကိုလိုက်ပြီးကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်မှာငါတို့မှာအပြစ်လွှမ်းမိုးမှုတွေလုံးဝကင်းစင်တယ်ဆိုတာကိုဝိရောဓိဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင် (သူတော်စင်များ) နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောခရစ်တော်ကဲ့သို့သောဘဝ (အပြစ်သားများ) ကိုမနေထိုင်ပါ။ လူသာကဤစကားပုံကိုဖော်စပ်သောအခါသူသည်ဧဝံဂေလိတရား၏အဓိကကိုနှစ်ဆတိုးကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရန်တမန်တော်ပေါလု၏ဘာသာစကားကိုသုံးခဲ့သည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုယေရှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုထည့်တွက်သည်။ ငွေချေးခြင်း၏ဤတရားဝင်နည်းပညာသုံးဘာသာစကားသည်တရား ၀ င်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအမှန်အတိုင်းဖော်ပြနိုင်စေသည်၊ ၎င်းသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အသက်တာ၌ပင်လျှင် ...
manမာနွေလ - ငါတို့နှင့်အတူဘုရားသခင်ရှိသည်
နှစ်ကုန်ခါနီးတွင်ငါတို့သည်ယေရှု၏လူ့ဇာတိကိုသတိရသည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်လူသားတစ် ဦး ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာပေါ်သို့ရောက်လာခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့လူသားဖြစ်သော်လည်းအပြစ်ကင်းသည်။ ဘုရားသခင်သည်အချိန်တိုင်းကြိုတင်ကြံစည်တော်မူသည့်အတိုင်း သာ၍ စုံလင်သော၊ သာလွန်သောသာမန်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ သူ၏မြေကြီးအသက်တာ၌သူသည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဖခင်နှင့်အပြည့်အဝမှီခိုပြီးအလိုတော်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယေရှုနှင့်သူ၏ခမည်းတော်သည်ယနေ့တိုင်အခြားမည်သူမျှမကြုံဖူးသောပုံစံဖြင့်တစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ပထမအာဒံသည်ဘုရားသခင်ထံမှအမှီအခိုကင်းစွာနေထိုင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပထမလူသား၏ဤအပြစ်သည်ဘုရားသခင်မှကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သောလွတ်လပ်ရေးသည်သူ၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ဘုရားသခင်နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ဒါဟာလူသားအားလုံးအတွက်ဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲ။ သခင်ယေရှုသည်စာတန်၏အချုပ်အနှောင်မှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်နုတ်ရန်မြေကြီးသို့ကြွလာခြင်းအားဖြင့်ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ ဘာမှမရှိသလိုဘယ်သူမှလည်းငါတို့ကိုလူသားတွေကိုသေခြင်းကနေလွှတ်ပေးဖို့သူ့ကိုတားလို့မရဘူး။ ထို့ကြောင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်သူသည်ငါတို့အတွက်သူ၏မြင့်မြတ်သောနှင့်လူသားအသက်ကိုစွန့်ခဲ့ပြီးငါတို့အပြစ်အားလုံးအတွက်အပြစ်ဖြေပေးခဲ့သည်။
နေ့စဉ်ဘ ၀ မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပါ
သင်တစ်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်လောက်ချပါသလဲ။ ရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ? သင်ဘာဝတ်သည်၊ နံနက်စာအတွက်ဘာစားရန်၊ ဘာအတွက်စျေး ၀ ယ်ရန်၊ ဘာမပါဘဲဘာလုပ်ရမလဲ။ သင်နှင့်ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်၌သင်မည်မျှအချိန်ဖြုန်းသနည်း။ အချို့ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ရိုးရှင်းပြီးစဉ်းစားစရာမလိုသော်လည်းအခြားသူများကဂရုတစိုက်ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ရွေးချယ်မှုမပြုလုပ်ဘဲ နေ၍ ၎င်းတို့ကိုမလိုအပ်တော့လျှင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုမီးကဲ့သို့ငြိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွှေ့ဆိုင်းသည်။ ငါတို့ရဲ့အတွေးတွေလည်းအတူတူပါပဲ။ ငါတို့စိတ်တွေဘယ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့နဲ့ဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာကိုရွေးနိုင်တယ်။ ဘာကို ၀ တ်ရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကအများကြီးပိုခက်နိုင်တယ်။ တခါတရံမှာငါ့ရဲ့စိတ်ကငါအလိုမရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေတယ်၊ ​​အရာအားလုံးကသူ့အလိုလိုဖြစ်ပုံရတယ်။ အဲဒီအခါမှာဒီအတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့အဲဒါတွေကိုအခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဆီ ဦး တည်ဖို့ငါအခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ ငါတို့အားလုံး ၂၄ နာရီသတင်းအချက်အလတ်တွေအလိုလိုချက်ချင်းကျေနပ်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းမရှိတာကိုငါယူဆတယ်။ ငါတို့မှာရှိတယ်…
ပေါလုက "ယေရှုခရစ်သည်သင်၌ရှိသည်" ဟုပြောသောအခါကဗျာဆန်ဆန်၊ ဤအရာကိုသူအမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်မှာယေရှုခရစ်သည်ယုံကြည်သူများအားအမှန်တကယ်နှင့်လက်တွေ့ကျကျကျိန်းဝပ်တော်မူသည်။ ကောရိန္သုသားများနည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်သိရန်လိုသည်။ ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပြင်တွင်သာမကလိုအပ်နေသောအကူအညီပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နေ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအမြဲတစေနေထိုင်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာဘာသာပြန် "လူသာ ၂၀၁၇"
“သင်တို့၌ စိတ်နှလုံးအသစ်နှင့် စိတ်ဝိညာဉ်သစ်ကို ငါပေး၍ သင်တို့၏အသားမှ ကျောက်နှလုံးကို ဖယ်ထုတ်ပြီး အသား၏နှလုံးကို ပေးမည်” (ယေဇကျေလ ၃။6,26).
“ငါထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မတ်တတ်ရပ်သည်ဖြစ်စေ သင်သိ၏။ အဝေးက ငါ့အတွေးတွေကို မင်းနားလည်တယ်။ ငါလမ်းလျှောက်သည်ဖြစ်စေ၊ လိမ်သည်ဖြစ်စေ မင်းက ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေပြီး ငါ့လမ်းတွေအားလုံးကို မြင်နေရတယ်။ အကြောင်းမူကား၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် မသိသောအကျွန်ုပ်၏လျှာ၌ စကားတခွန်းမျှမရှိပါ။ မင်းက ငါ့ကို အရပ်ရပ်က ဝိုင်းပြီး ငါ့လက်ကို ကိုင်ထား။ ဤအသိပညာသည် အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်း၍ ကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်လောက်အောင် မြင့်မားလှသည်” (ဆာလံ ၁၃9,2-6) ။
“ငါ့အသားကိုစား၍ ငါ့အသွေးကိုသောက်သောသူသည် ငါ၌တည်၏၊ ထိုသူ၌ငါတည်၏။” (ယော 6,56) ။
“လောကီသားတို့သည် မမြင်နိုင်၊ မသိနိုင်သောကြောင့်၊ အမှန်တရား၏ဝိညာဉ်တော်၊ သင်​တို့​နှင့်​အ​တူ​ရှိ​၍ သင်​တို့​အ​ထဲ​၌​ရှိ​မည်​အ​ကြောင်း​မူ​ကား၊ ထို​သူ​ကို​သင်​တို့​သိ​ကြ​လော့။" (ယော၊ ၁4,17).
"ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၌ရှိ၏၊ သင်တို့သည် ငါ၌ရှိ၍ ငါသည် သင်တို့၌ရှိကြောင်းကို ထိုကာလ၌ သင်တို့သိရကြလိမ့်မည်။" (ယော၊ ၁။4,20).
“ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုချစ်သောသူသည် ငါ့စကားကို စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ ငါ့အဘသည် ချစ်တော်မူသဖြင့်၊ ငါတို့သည် သူ့ထံသို့လာ၍ သူနှင့်အတူ အိမ်ဆောက်ကြလိမ့်မည်။” (ယော၊ ၁4,23).
“ငါ၌နေကြလော့။ စပျစ်နွယ်ပင်၌မတည်လျှင် အကိုင်းအခက်သည် အလိုလိုအသီးမသီးနိုင်သကဲ့သို့၊ ငါ့၌မတည်လျှင် သင်တို့သည်လည်း အသီးမသီးနိုင်ကြ။” (ယော၊ ၁။5,4).
“သင်တို့သည် တလုံးတဝတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်တော်မူကြောင်းကို လောကီသားတို့သည် သိစေခြင်းငှာ၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကိုချစ်သကဲ့သို့ သူတို့ကို ချစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်း၊7,23).
“ထို့​ပြင် သင်​တို့​သည် ငါ့​ကို​ချစ်​သော​မေတ္တာ​သည် သူ​တို့​၌​ရှိ​စေ​ခြင်း​ငှာ ငါ​၏​နာ​မည်​ကို​သူ​တို့​အား​ဖော်​ပြ​၍​သိ​စေ​မည်​ဖြစ်​သည်'' ဟု​ယော​ဟန် ၁၊7,26).
“ခရစ်တော်သည် သင်တို့အထဲ၌ရှိတော်မူလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာသည် အပြစ်ကြောင့်သေသော်လည်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့် ဝိညာဉ်သည် အသက်ရှင်၏” (ရောမ၊ 8,10).
“ထိုကြောင့် ငါသည် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုခြင်း၌ ယေရှုခရစ်၌ ဝါကြွားခြင်းရှိ၏” (ရောမ ၁ ကော5,17).
"သင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် သင့်အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်သည်ကို သင်မသိသလော။" (1. ကောရိန္သု 3,16).
“ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ငါသည် ငါဖြစ်၏ ။ ကျေးဇူးတော်သည် အချည်းနှီးမဖြစ်ဘဲ၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ့ဘက်၌ရှိသောဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သာဖြစ်သည်” (1. ကောရိန္သု ၁5,10).
“အကြောင်းမူကား၊ ယေရှုခရစ်၏ မျက်နှာတော်၌ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကို သိကျွမ်းခြင်းအလင်းကို ပေးဆောင်ခြင်းငှာ မှောင်မိုက်ထဲက အလင်းကို ထွန်းလင်းစေတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ငါတို့စိတ်နှလုံးကို ထွန်းလင်းစေတော်မူပြီ” (2. ကောရိန္သု 4,6).
“သို့သော်လည်း၊ အလွန်တန်ခိုးတော်သည် ငါတို့ထံမှမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ဤဘဏ္ဍာကို မြေအိုးထဲ၌ ငါတို့၌ ရှိသည်” (2. ကောရိန္သု 4,7)
“အကြောင်းမူကား၊ အသက်ရှင်သော ငါတို့သည် သခင်ယေရှု၏အသက်ကို ငါတို့၏သေတတ်သောသတ္တဝါ၌ ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၊ သို့ဖြစ်၍ ယခု သေခြင်းတရားသည် ငါတို့၌ တန်ခိုးကြီးသော်လည်း သင်တို့၌ အသက်ရှိ၏” (2. ကောရိန္သု 4,11-12) ။
“သင်တို့၌ အားနည်းသော်လည်း သင်တို့တွင် တန်ခိုးကြီးသော ခရစ်တော်သည် ငါ့အထဲ၌ မိန့်တော်မူကြောင်း သက်သေကို တောင်းကြလော့။”2. ကောရိန္သု ၁5,3).
“သင်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သလော၊ သင့်ကိုယ်သင် စစ်ဆေးပါ။ သို့မဟုတ် ယေရှုခရစ်သည် သင်တို့၌ရှိတော်မူကြောင်းကို သင်တို့ကိုယ်တိုင်မသိကြသလော။ (2. ကောရိန္သု ၁5,5).
“ငါ့ကို အမိဝမ်းထဲက ခွဲခွာ၍ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သော ဘုရားသခင်သည် နှစ်သက်တော်မူသောအခါ၊ ၁၆ ငါ၌ သားတော်ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ၊ ငါသည် တပါးအမျိုးသားတို့တွင် ဟောပြောခြင်းငှာ အသွေးအသားနှင့် မတိုင်ပင်ဘဲ၊ (ဂလာတိ 1,15-16) ။
“ငါအသက်ရှင်သော်လည်း၊ ငါမဟုတ်၊ ခရစ်တော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူ၏။ ယခု ငါသည် ဇာတိပကတိ၌ အသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍၊ ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်၏" (ဂလာတိ၊ 2,20).
"ခရစ်တော်သည် သင်တို့အထဲ၌ ဖန်ဆင်းတော်မူသည်တိုင်အောင်၊ ငါသည် တဖန် ပင်ပန်းစေသော ငါ့သားတို့၊ (ဂလာတိ 4,19).
“ကိုယ်တော်အားဖြင့် သင်တို့သည်လည်း ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်အတွက် ကျိန်းဝပ်ရာအရပ်၌ တည်ကြသည်” (ဧဖက်၊ 2,22).
“ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်သည် သင့်စိတ်နှလုံး၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူပါစေသော။ သင်တို့သည် အမြစ်တွယ်၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ အမြစ်စွဲလျက်ရှိသည်” (ဧဖက် 3,17).
“ဘုရားသခင်သည် တပါးအမျိုးသားတို့တွင် ဤနက်နဲသောအရာ၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာဟူသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား သိစေတော်မူလိုသည်” (ကောလောသဲ၊ 1,27).
“ဘုရားသခင့်ခေါင်း ဆောင်တော်၏ ပြည့်စုံခြင်း ရှိသမျှသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ကျိန်းဝပ်၍၊ 10 တန်ခိုးအာနုဘော်ရှိသမျှတို့ကို အုပ်စိုးသော သူနှင့် သင်တို့သည် ပြည့်ကြ၏” (ကောလောသဲ၊ 2,9-10) ။
“ဂရိလူမျိုး၊ ဂျူးလူမျိုးမရှိ၊ အရေဖျားလှီးခြင်းခံသူ သို့မဟုတ် အရေဖျားလှီးခြင်းမခံသော၊ ဂရိလူမျိုးမဟုတ်၊ ဆစ်သီယန်၊ ကျွန်၊ လွတ်မြောက်သော်လည်း ခရစ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအကြွင်းမဲ့ဖြစ်တော်မူ၏။” (ကောလောသဲ၊ 3,11).
“အဦးအစကတည်းက ကြားဘူးသမျှကို မင်းနဲ့အတူနေပါ။ သင်တို့သည် ရှေးဦးစွာမှစ၍ ကြားနာသောအရာသည် သင်တို့၌တည်လျှင်၊ သင်တို့သည်လည်း သားတော်၌လည်းကောင်း၊ ခမည်းတော်၌လည်းကောင်း တည်နေလိမ့်မည်။”1. ဂျိုဟန် 2,24).
“သင်တို့သည် သူ့ထံမှရရှိသော ဘိသိက်ပေးခြင်းသည် သင်တို့၌ တည်နေ၍၊ သင်တို့ကို သွန်သင်ရန် အဘယ်သူမျှ မလိုအပ်ပါ။ ဘိသိက်တော်သည် သင်တို့အား ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သွန်သင်တော်မူသည်အတိုင်း မှန်သည်ဖြစ်၍ မုသာမဟုတ်၊ သွန်သင်တော်မူသည်အတိုင်း၊1. ဂျိုဟန် 2,27).
“အကြင်သူသည် မိမိပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်သောသူသည် ဘုရားသခင်၌တည်၏။ ဘုရားသခင်သည်လည်း ထိုသူ၌ တည်၏။ ထိုမှတပါး ငါတို့၌တည်တော်မူကြောင်းကို ငါတို့သိကြ၏။1. ဂျိုဟန် 3,24).
“သားတို့၊ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်၍ သူတို့ကို အောင်ပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့၌ရှိသောသူသည် လောက၌ရှိသောသူထက် သာ၍ကြီးမြတ်၏။"1. ဂျိုဟန် 4,4).
“သူကြွလာသောအခါ၊ မိမိသန့်ရှင်းသူတို့တွင် ဘုန်းထင်ရှားစေခြင်းငှာ၊ ငါတို့သည် သင်တို့အား သက်သေခံတော်မူသည်အတိုင်း၊2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 1,10).